“Suarez wuxuu iska diiday Paris Saint-Germain.” – Thomas Tuchel – Gool FM
Dajiye February 23, 2021
(London) 23 Feb 2021. Tababaraha kooxda kubadda cagta Chelsea ee Thomas Tuchel ayaa ka hadlay weeraryahanka reer Uruguay iyo naadiga Atletico Madrid ee Luis Suarez, kahor kulanka ay labada kooxood ay caawa ku wada ciyaari doonaan Champions League.
Kooxaha Atletico Madrid iyo Chelsea ayaa caawa ku wada dagaallami doona kulan ka tirsan lugta koowaad ee wareegga 16-ka tartanka UEFA Champions League ciyaar ka dhici doonta garoon dhex-dhexaad ah oo ku yaalla magaalada Bucharest ee ah caasimadda dalka Romania.
Thomas Tuchel ayaa qirtay in kooxdiisii ​​hore ee Paris Saint-Germain, ay isku dayday inay lasoo saxiixato Suarez xagaagii lasoo dhaafay, kaddib markii Barcelona ay go’aansatay inay iska iibiso, laakiin ciyaaryahanka ayaa doorbiday inuu sii joogo Spain si uu ugu biiro Atletico.
Haddaba wargeyska “Mundo Deportivo” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay macalinka kooxda PSG ee Thomas Tuchel, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waxaa jirtay suurtagalnimada in Suarez uu ka tago Barcelona. Anaga (Saint Germain) waxaan xiiseynaynay inaan la saxiixano isaga oo ka mid ah weeraryahanada ugu fiican adduunka.”
“Waan isku daynay, laakiin wuxuu doorbiday inuu sii joogo Spain oo uu u saxiixo Atletico, Suarez waa weeraryahan dabiici ah, wuxuu leeyahay tayo la mid ah weeraryahanada waa weyn.”
“Wuxuu had iyo jeer doonayaa inuu muujiyo rabitaankiisa ah inuu dhaliyo, anaga (Chelsea) wan ognahay sida uu qatar u yahay, waana isku dayi doonaa inaan joojino.”
Si kastaba ha ahaatee, Suarez ayaa xilli ciyaareed qurux badan la qaadanaya kooxda Atletico Madrid ilaa iyo haatan, maadaama uu yahay ciyaaryahanka ugu goolasha badan horyaalka La Liga, kaddib markii uu dhaliyay 16 gool, waxayna ka wada siman yihiin Lionel Messi.
Horudhac: Atletico Madrid vs Chelsea... (Rikoorka wanaagsan ee uu Diego Simeone ka heysto tartankan oo halis ku ah Blues)
Ronaldo oo diray fariin xiiso leh kaddib markii uu noqday gooldhaliyaha ugu sareeya horyaalka talyaaniga